Diabetes – Page5– Healthy Life Journal
ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ စိတ်နဲ့ခန္ဓာ ဆက်စပ်ပုံ စိတ်ပြောင်းလဲတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး (physiology) ဇီဝဗေဒပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- Autonomic nervous system activation အော်တိုနိုးမိတ်ခ် အာရုံကြောစနစ်တွေကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ အစားအသောက်ကို ကယ်လိုရီ တွက်ချက်စားသင့်ပါသလား၊ အဲဒီလို စားတာက ဆီးချိုထိန်းနိုင်ပါသလား။ KMM(FB) A. ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါရှိသူတွေမှာ အစားအသောက်ကို ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီး စားသောက်တာက ဆီးချိုထိန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီး...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ . . .
Q. ဆီးချိုရောဂါကို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရပါမလဲ ဆရာ။ ဦးလွင်ဦး၊ လှိုင်သာယာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀၊ တစ်ပတ်မှာ မိနစ် ၁၅၀ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးတာကြောင့်...
Q. သာမန်လူတွေက သကြားကို တစ်နေ့ဘယ်လောက် စားနိုင်ပါသလဲ။ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေကကော သကြားကို တစ်နေ့ဘယ်လောက် စားလို့ရပါသလဲ။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေကကော သကြားကို တစ်နေ့ဘယ်လောက် စားလို့ရပါသလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. သာမန်လူတွေက သကြားကို...
Q. အခုခေတ်မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆီးချိုအဖြစ်များနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြို့နေလူထုတင်မက တောကလူတွေပါ ဆီးချိုဖြစ်နေကြတာပါ။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်စားသောက်သင့်ပါသလဲ။ TiTi (FB) ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) A. ဘာစားစား မျှမျှတတဖြစ်အောင် စားပါ။...
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ဆက်စပ်ပုံ ဆီးချိုဖြစ်ခါနီး Prediabedes အကြိုဆီးချို ရှိသူတွေ အပါအဝင် အမျိုးအစား၂ ဆီးချိုရှိသူတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် အယ်လ်ဇိုင်းမားသူငယ်ပြန်ရောဂါ ဖြစ်လာမယ့်အလားအလာ ပိုရှိပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆီးချိုသွေးချိုထိန်းသိမ်းတာ မကောင်းရင် မှတ်ဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်တွေ...
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ ဆက်စပ်မှုရှိသလားမေးရင်ရှိတယ်လို့ဖြေရပါမယ်။တော်တော်လေး နီးနီးစပ်စပ်ဆက်စပ်မှုရှိနေတာကို လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုကို ပြုပြင်ပေးခြင်းသည် အယ်လ်ဇိုင်းမားကို ကာကွယ်ကုသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါနှစ်ခု ဆက်စပ်ပုံအကြောင်းမပြောမီ အယ်လ်ဇိုင်းမားသူငယ်ပြန်ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိသလဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံး ရှင်းပြလိုပါတယ်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဟာ...
မက်ဖော်မင်၏ ‘သွေးချိုကျစေတဲ့ကောင်းကျိုးအပြင်’ Metformin : Beyond glycemic control
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အမျိုးသမီးရောဂါနှင့် မက်ဖော်မင် မက်ဖော်မင်ဟာ ဝတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် အသုံးကျတဲ့ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချို DM နဲ့ ရာသီမမှန်တဲ့ PCOS ရောဂါတွေမှာလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ PCOS (အရှည်ကောက် polycystic ovary syndrome) ကတော့...
မေး. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေက တညင်းသီးစားလို့ရပါသလား ဆရာ။ ဒေါ်မြမေ၊ ပြည်။ ပါမောက္ခ ဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။) ဖြေ. တညင်းသီးက ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစာပါ။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကလည်း နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်တတ်တဲ့အတွက် ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက...